Denizli Visa Card ကိုအချက်ပေးအတွက်ကျောင်းသားများ - rayhab ဖြစ်ပါသည်
Homeတူရကီတူရကီ Aegean ကမ်းခြေ20 DenizliDenizli Visa Card ကိုသတိပေးခြင်းအတွက်ကျောင်းသားများ
Denizli Visa Card ကိုသတိပေးခြင်းအတွက်ကျောင်းသားများ
09 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 20 Denizli, တူရကီ Aegean ကမ်းခြေ, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, ဘီးစနစ်များ, တူရကီ 0
Denizli မြူနီစီပယ်, 2019-2020 "Denizli ကျောင်းသားကဒ်" ဗီဇာယူပြီးများအတွက်သတိပေးခဲ့သည်ခဲ့သည်ကျောင်းသားများကိုဒီတော့ကျောင်းတစ်နှစ်ရဲ့ start ။ ဗီဇာကာလစက်တင်ဘာလ 30 2019 အပေါ်ကိုအဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်။
Denizli ကျောင်းသားကဒ်အတွက်ဗီဇာသတိပေးဘို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမြို့ပြဘတ်စ်ကားအတွင်းဖြန့်ချိခဲ့သည့် Denizli မြူနီစီပယ်။ 2019-2020 ပညာရေးနှင့်ဤအရပ်မှ Denizli ကျောင်းသားကဒ်အတွက်ပညာသင်နှစ်ရဲ့ start ဗီဇာ၏သတိပေးအကြွင်းမဲ့အာဏာပြုခံရဖို့လိုအပ်ကြောင်းကိုဖန်ဆင်းပြုလုပ်ဗီဇာချတဲ့အခါကဒ်ကိုအသုံးပြုမရနိုငျကြေညာခဲ့သည်။ Denizli ကျောင်းသားကဒ်ဗီဇာ၏မကြာသေးမီကသမိုင်း 30 စက်တင်ဘာလ 2019 သည်အထိကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။ အောက်တိုဘာလ 02 2019 မှတ်ချက်ချခံရဖို့ကတည်းက Denizli ကျောင်းသားကဒ်ဗီဇာအောင်ပြီးနောက်မှာမမှန်ကန်ကဒ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဗီဇာ application များအတွက်လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများ
အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းဗီဇာ application များအတွက်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြ: "2019-2020 ပညာသင်နှစ်ကျောင်းသားဝိသေသလက္ခဏာကတ်ကို (လက်ခံရရှိကျောင်းသားလက်မှတ်နှင့်ပညာသင်နှစ်တွင်နဖူးစည်းစာတမ်းတွေကျောင်းသား ID ကိုကတ် 2019-2020 ကနေ E-အစိုးရကျောင်းသားတစ်ဦးလက်မှတ်တွေကိုအစားထိုးသွားပါတယ်။ )" မှတ်ချက်: မွေးဖွားခြင်း ပိုက်ဆံအိတ် 2003 နှစ်ပေါင်းသည်အထိလုံလောက်သောသူကြောငျးသားမြား၏လူဦးရေမှာအတူတက်လာ။
ဖယ်ရှားပစ်ရန်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းသစ် Denizli ကျောင်းသားကဒ်ကပြောကြားသည် အကယ်. : "ကျောင်းသားရဲ့အထောက်အထားကဒ်၏ 2019-2020 ပညာသင်နှစ် (E-အစိုးရပညာရေးစာသင်ကျောင်းသား ID ကိုကဒ်၏ကျောင်းသားတစ်ဦးလက်မှတ်နှင့်နဖူးစည်းစာတမ်းတွေ 2019-2020 ထံမှလက်ခံရရှိကျောင်းသားတစ်ဦးလက်မှတ်အစားထိုး။ ) နောက်ဆုံး6အတွက် 1 ဓာတ်ပုံတွေလအတွင်းခေါ်ဆောင်သွား "မှတ်ချက်။ 2003 1 နှစ်ကျောင်းသားများကိုဆောင်ခဲ့ခြင်းမွေးဖွားမွေးဖွားလက်မှတ်နှင့်ပတ်စ်ပို့ဓာတ်ပုံများ၏ရက်စွဲကိုလုံလောက်ပါတယ်။
ကဒ်ကနေ Denizli ကျောင်းသားများတရားဝင်နှင့်2နှစ်ပေါင်း4အတွက်ပုဂ္ဂလိကပညာရေးအဖွဲ့အစည်းများ, တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ, ဘွဲ့ရကျောင်းသားများ, ဘွဲ့လွန်နှင့်ပါရဂူကျောင်းသားများ, အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာရေးညွှန်ကြားရေးမှူး (အလုပ်သင်), ပွင့်လင်းတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများ (4 နှစ်များတွင်လေ့လာနေကျောင်းသားများနှင့်အတူမှတ်ပုံတင်7ကျောင်းသူများနှစ်စဉ်အခွင့်အရေးများအနေဖြင့်အကျိုးရှိမည်), ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပွင့်လင်းအထက်တန်းကျောင်းကျောင်းသားများ, စစ်တပ်နှင့်ရဲအထက်တန်းကျောင်းကျောင်းသားများကိုအထက်တန်းကျောင်းသားများအတွက်အသုံးပြုသောခံရဖို့ဖော်ပြထားခဲ့သည် vocational ။
အဆိုပါဗီဇာဖြစ်စဉ်ကို Denizli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးA.Ş၏နိုင်ငံသားများ .; ဟောင်းတဦးကဒ် Refill Center ကဆန့်ကျင်ဘက်တည်ရှိသောအထူးအုပ်ချုပ်ရေးအဆောက်အအုံ, Bayramyeri Square ကိုကတ် Refill စင်တာ, ဘတ်စ်ကားဘူတာရုံ Refill ကတ်စင်တာ, သူတို့ Denizli မြူနီစီပယ်အဆောက်အအုံကတ် Refill စင်တာမှဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဟုပြောသည်။
Denizli Card ကိုဗီဇာကာလစတင်များတွင်ကျောင်းသားများ 03 / 09 / 2018 အဆိုပါဗီဇာကာလ၏အစမှာ "Denizli ကျောင်းသားကဒ်" တွင်အသုံးပြုရန်အတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပေးသောမြို့ဘတ်စ်ကား၏ Denizli မြူနီစီပယ်။ ဗီဇာကာလစက်တင်ဘာလ 30 2018 အပေါ်ကိုအဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါဗီဇာကာလ၏အစမှာ "Denizli ကျောင်းသားကဒ်" တွင်အသုံးပြုရန်အတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပေးသောမြို့ဘတ်စ်ကား၏ Denizli မြူနီစီပယ်။ 2018-2019 ပညာသင်နှစ် Denizli ကျောင်းသားကဒ်များအတွက်ဗီဇာလုပ်ငန်းစဉ်၏က start မှ 30 ၏ entry ကိုဗီဇာကာလနှင့်အတူစက်တင်ဘာလ 2018 အတွက်အဆုံးသတ်မည်ဤရက်စွဲသည်အထိကဒ်ချမှတ်ခြင်းဗီဇာအတွက်အသုံးပြုမရနိုငျသတ်မှတ်ထားသောခဲ့သည်။ အဆိုပါ Bayramyeri Visa Card ကိုစင်တာ, Refill Card ကိုအထူးအုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုဌာနအစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်ကတ် Refill ရေးစင်တာနှင့် Denizli မြူနီစီပယ်ဘတ်စ်ကား Terminal နှင့်ကတ်ဖြည့် ...
ဗီဇာကာလ Denizli ကျောင်းသားကဒ်အတွက်စတင် 29 / 08 / 2019 အဆိုပါဗီဇာကာလ၏အစမှာ "Denizli ကျောင်းသားကဒ်" တွင်အသုံးပြုရန်အတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပေးသောမြို့ဘတ်စ်ကား၏ Denizli မြူနီစီပယ်။ ဗီဇာကာလစက်တင်ဘာလ 30 2019 အပေါ်ကိုအဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါဗီဇာကာလများတွင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအသုံးပြုမှုကိုပေးသောမြို့ဘတ်စ်ကား၏ Denizli မြူနီစီပယ် Denizli ကျောင်းသားကဒ်အတွက်စတင်ခဲ့သည်။ 2019-2020 အဆိုပါပညာသင်နှစ်ရဲ့ start, ကအကြွင်းမဲ့အာဏာဗီဇာ Denizli ကျောင်းသားကဒ်တစ်လမ်းဖြစ်သင့်ဒီတော့ဗီဇာအောင်သောအခါ, ကဒ် အသုံးပြု. မရပါထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ ဤအခြေအနေတွင်မှာဗီဇာလုပ်ငန်းစဉ် Denizli ကျောင်းသားကဒ်ဗီဇာနောက်ဆုံးနေ့ကြောင်း 30 စက်တင်ဘာလ 2019 သည်အထိထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အတွက်စတင်ခဲ့သည်။ လျှင်အောက်တိုဘာလ 02 2019 မှတ်ချက်ကတ်များကတည်းက Denizli ကျောင်းသားကဒ်ဗီဇာအောင်ပြီးနောက်မှာမမှန်ကန်ပါလိမ့်မည် ...
Kocaeli ဟာမြို့တော်ကနေသတိပေး: "ဗီဇာကျောင်းသားခရီးသွားကတ်များကိုလုပ်ဖို့မေ့လျော့တော်မမူပါနှင့်" 10 / 11 / 2017 Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ပြည်သူ့ပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာနသမ္မတကျောင်းသားဗီဇာဖြစ်စဉ်ကိုကနေကြေညာချက်အရသိရသည်လျှော့စျေးခရီးသွားကဒ်နိုဝင်ဘာလ၏ပထမရက်သတ္တပတ်ကတည်းကစတင်ခဲ့သည်။ ဤသည်စည်းမျဉ်းဥပဒေ, ခရီးသွားကဒ်များအားဖြင့်အင်အားသုံးအတွက်ဖြစ်သင့်တယ် Kentkart အဆာအချက်များနှင့်ခရီးသွားကတ်များယူနစ်ကိုတကျရောကျကျောင်းသားများအတွက်ဗီဇာဖြစ်စဉ်ကိုဖြစ်စေမည်။ Kentkart အဆာမှတ်နေတဆင့်ကျောင်းသားများနှင့်MEBSİSYÖKSİSကို web service ကိုအဘို့အလျှော့စျေးခရီးသွားကဒ်များ POINT Kentkart ဖြည့်စွက်ခြင်း, ဗီဇာဖြစ်စဉ်ကိုတပ်ဆင်၏ချိန်ခွင်လျှာကာလအတွင်းကျောင်းသား status ကိုသက်သေပြတင်ပြရန်မလိုဘဲအလိုအလျှောက်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ ကားရောင်းဝယ်ရေးဖြည့်ဆည်းခြင်းဖြင့်ချိန်ခွင်လျှာ Kentkart refilling ကာလအတွင်းအလိုအလျှောက်လုပ်ဆောင်ခံရဖို့ကျောင်းသားခရီးသွား Card ကိုဗီဇာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ။ ဇန်နဝါရီလ 01 ...
အဆိုပါတိုးချဲ့ခြင်း Tarith Kocaeli တဲ့ Metropolitan ကျောင်းသားလျှော့ခရီးသွားဗီဇာကတ်အရောင်းအဝယ် 15 / 12 / 2016 Kocaeli တဲ့ Metropolitan ခရီးသွားကတ်လျှော့စျေးခရီးသွားကဒ်ဒီဇင်ဘာလသည်အထိဆက်လက်ပါလိမ့်မယ် 15 မှနိုဝင်ဘာလ 31 စတင်ခဲ့ကြောင်းကျောင်းသားဗီဇာလုပ်ငန်းစဉ်၏ Tarith အဆိုပါ Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ပြည်သူ့ပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှဗီဇာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများများတိုးချဲ့ခြင်း။ ဇန်နဝါရီလ 1 2017 ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ပြီးနောက် non-ကျောင်းသားဗီဇာခရီးသွားကဒ်လက်မှတ်အခွန်အပြည့်အဝ type ကိုပြန်သွားပါ။ CITY ကဒ်ဖြည့်ကျောင်းသားများစစ်ဆင်ရေးကဲ့သို့သော2ဗီဇာလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်ထောက်ပြသည်; Kentkart အဆိုပါအဆာပွိုင့်: Kentkart အဆာမှတ်နေတဆင့်YÖKSİSနှင့်MEBSİSကို web service ကို, တပ်ဆင်၏ချိန်ခွင်လျှာနေစဉ်အလိုအလျှောက်ပြုမိဗီဇာလုပ်ငန်းစဉ် (စာရွက်စာတမ်းကျောင်းသားတင်ပြခြင်းမရှိဘဲ) ။ ချိန်ခွင်ရောင်းဝယ်ရေးဖြည့်ဘို့ဗီဇာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကျောင်းသားခရီးသွားကဒ် Kentkart ...
Kocaeli ကျောင်းသားကဒ်ဗီဇာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ Continues 20 / 12 / 2017 Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ပြည်သူ့ပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာနခရီးသွားကဒ်များမှချိတ်ဆက်ထားပါတယ်ယူနစ်အားဖြင့်ထုတ်ပြန်ခဲ့သောဗီဇာကျောင်းသားလျှော့စျေးကဒ်ကို process မှဆက်လက်နေကြသည်။ အဆိုပါဗီဇာဖြစ်စဉ်ကိုကို web န်ဆောင်မှုများနှင့်အလိုအလျှောက်ဖြည့်ပစ္စည်းကိရိယာများမှတဆင့်YÖKSİSMEBSİS Kentkart များအတွက်ကျောင်းသားခရီးသွားလျှော့စျေးကဒ်ကာလအတွင်းကျောင်းသား status ကိုသက်သေပြတင်ပြရန်နှင့်အပြည့်အဝချိန်ခွင်လျှာအမှတ်ကိုထည့်သွင်းရန်မလိုဘဲအလိုအလျှောက်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ ကိရိယာမိမိတို့၏ဗီဇာဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုဖြည့်အလိုအလြောကျဗီဇာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများလုပ်ပြီးကာလအတွင်းကျောင်းသား status ကိုသက်သေပြတင်သွင်းခြင်းမရှိဘဲဖန်ဆင်းနိုင်ပါသည်ဆာပွိုင့်၏ installation ၏ Kentkart အလိုအလျောက်ဖြည့်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်မှန်သောချိန်ခွင်ကနေတဆင့်YÖKSİSနှင့်MEBSİSကို web service ကိုများအတွက်ကျောင်းသားခရီးသွားကတ်များလျှော့နိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်လျှော့စျေးကျောင်းသားကဒ် ...
Denizli ကျောင်းသား Visa Card ကိုအချက်များ
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Turkoglu ပြည်နယ်ဆေးရုံ၏လွယ်ကူခြင်း
Denizli Card ကိုဗီဇာကာလစတင်များတွင်ကျောင်းသားများ
ဗီဇာကာလ Denizli ကျောင်းသားကဒ်အတွက်စတင်
Kocaeli ဟာမြို့တော်ကနေသတိပေး: "ဗီဇာကျောင်းသားခရီးသွားကတ်များကိုလုပ်ဖို့မေ့လျော့တော်မမူပါနှင့်"
အဆိုပါတိုးချဲ့ခြင်း Tarith Kocaeli တဲ့ Metropolitan ကျောင်းသားလျှော့ခရီးသွားဗီဇာကတ်အရောင်းအဝယ်
Kocaeli ကျောင်းသားကဒ်ဗီဇာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ Continues
Antalyakart ကျောင်းသားဗီဇာ Process ကိုစတင်
အဆိုပါ converter ကို drive ကိုဖုံး-ပရိုကတ်အချိန် Relay-Card ကိုပစ္စည်းဝယ်ယူရေးရာသီဥတုထိန်းချုပ်ရေးအီလက်ထရောနစ် (TÜVASAŞ) ကောက်ချက်ချ
Denizli Card ကိုဗီဇာကာလ၌သက်ကြီးရွယ်အိုများအားနှင့်မသန်စွမ်း
Denizli Card ကိုဗီဇာကာလအတွက်သက်ကြီးရွယ်အိုများအားနှင့်မသန်စွမ်း
ဗီဇာ Bursa မြို့ပြ Cable ကိုကားလိုင်း